Home Somali News Gaari bom lagu soo xirey ayaa ku qarxay waddada 30-ka ee magaalada...
Gaari Totoyo ah oo lagu soo xirey bom ayaa maanta oo Sabti ah ku qarxay waddada 30-ka ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan ee sida weyn loo isticmaalo, qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhaw aqalkii la dhihi jirey NBC ee degmada Hodan.
Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatey dad kalena waa ku dhaawacmeen.
Gaariga qarxey ayaa ahaa mid laga shakiyey waxaana eryoodey gaari kale oo ciidamada Dowladdu iska lahaayeen. Kadib gaariga bomku ku xirnaa ayaa galay shil isaga oo isla goobtaas ku qarxey, waxaana uu ku dhacay derbi ka soo horjeeda dhismihii la dhihi jirey NBC.
Guddoomiyaha Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir Cabdulqaadir Cali Kulane oo warbaahinta Dowladda la hadley ayaa faah faahin ka bixiyay sida uu u dhacay howlgalkaasi, isagoo sheegay in howlgalkaasi lagu guuleystay islamarkaana ciidamada si deg-deg leh ay kaga hortageen isku daygaasi dhagaraqabayaasha ay ku doonayeen in ay ku dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed.
Dadka dhintey ayaa la aaminsan yahay in ay ahaayeen kuwii gaariga watey, waxaana dadku sheegayaasn in la doonaayey in gaariga weerar u isticmaalaan, kaas oo noqdey mid fashilmey, Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka ku dhaawacmey ay ka mid yihiin ciidamada Dowladda.
Somalia: Somali leaders set to decide on election model
Somaliland: Murashaxa Xisbiga WADDANI Oo La Waydiiyay Haddii Uu Doorashada Ku Guulaysto Wuxuu Ka Yeeli Doono Saldhiga Millatari Ee Imaraadka.